BUDDHIST TERMS' Dictionary: BUDDHA IMAGE - ဗုဒ္ဓပဋိမာ
BUDDHA IMAGE - ဗုဒ္ဓပဋိမာ
ဗုဒ္ဓပဋိမာ (Buddha paṭimᾱ) - ဘုရားရုပ်တုတော်၊ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ဘုရားပုံတော်။
မြတ်စွာဘုရားသည် လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံး၏ ကျေးဇူးအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်သည်။ အစဉ်သတိရနေထိုက်သူ အလေးဂရုပြုထိုက်သူ မြတ်နိုးပူဇော်ထိုက်သူ ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူး အကြီးမားဆုံး အလေးဂရုပြုထိုက်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်သောကြောင့်ပင် မြတ်စွာဘုရားကို အစဉ်သတိရနေစေရန် ရုပ်တုတော် ပြုလုပ်၍ ဥဒ္ဒိဿကစေတီအနေဖြင့် ကိုးကွယ်အပ်၏၊ ပူဇော်အပ်၏၊ ရှိခိုးအပ်၏။ ရုပ်တုတော်ကို ရှိခိုးပူဇော်မူ၌ စိတ်စေတနာထက်သန်လျှင် ထက်သန်သလောက် သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားနှင့်မခြား ကြီးမားများပြားသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ရရှိနိုင်သည်။
Likeness of the Buddha; statue of the Buddha
The Buddha is the greatest benefactor of all living beings including men and devas. He is one who should always be remembered, revered and paid homage to. Because he is the greatest benefactor and the most homage-worthy, to enable one to have him always in one’s mind one should make an image of the Buddha and have it worshipped as the Uddissa Cetiya. In performing the act of veneration, depending on the degree of one’s sincerity and keenness, one can have as much benefit as one would gain by paying homage to the living Buddha.